Nsogbu m na Software Management Project | Martech Zone
Nsogbu m na Software Management Project
Wenezde, August 14, 2013 Wenezde, August 14, 2013 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ, m na-eche ma ndị folks na-emepe emepe ihe eji arụ ọrụ na-eji ha eme ihe. N'ime oghere ahia, ngwanrọ njikwa ngwanrọ bụ ihe dị mkpa - ịdebe mgbasa ozi, ozi, vidiyo, akwụkwọ akụkọ, iji ọnọdụ ndapụta na ọrụ ndị ọzọ bụ nnukwu okwu.
Nsogbu anyị yiri ka anyị na sọftụwia njikwa njikwa ọrụ niile bụ usoro nke ngwa. Ihe oru ngo bu elu nke ndi isi, mgbe ahu ndi otu, mgbe ahu ihe omuma na oge. Nke ahụ abụghị otu anyị si arụ ọrụ n’oge a… ọkachasị ndị ahịa. Agencylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ 30+ n'ụzọ dị mfe kwa ụbọchị. Onye ọ bụla so na ya na-agbagharị ruo mmadụ iri na abụọ.
Nke a bụ otu Software Management Software si arụ ọrụ oge niile:
Ndị a bụ ọnọdụ atọ m na - enweghị ike ime na anyị Nchịkwa oru ngo:
Ahịa / Ọrụ Prioritization - oge ndị ahịa na-agbanwe oge niile na mkpa onye ahịa ọ bụla nwere ike ịdị iche. Ọ bụrụ na m nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata mkpa nke onye ahịa ma nwee usoro nke gbanwere ọrụ mbu maka ndị otu arụ ọrụ gafee ọrụ ya mere.
Ọrụ Prioritization - Ekwesịrị m ịpị onye so na sọftụwia Njikwa njikwa ma hụ ihe niile ha na-eme gafee ọrụ ha niile wee mezie ihe kachasị mkpa na ndabere onwe onye.
Shakekọrịta Akụrụngwa - Anyị na - emepekarị otu ụzọ maka ndị ahịa ma were ya gafee ndị ahịa. Ugbu a, nke ahụ chọrọ ka anyị kekọrịta ya n'ime ọrụ ọ bụla. Ọ dị nzuzu na enweghị m ike ịkekọrịta otu koodu nke gafere ọrụ na ndị ahịa.
Nke a bụ eziokwu nke otu anyị si arụ ọrụ n'ezie:
Anyị anwalewo n'ezie na ịmepụta njikwa ọrụ na mpụga njikwa ọrụ anyị iji jikwa ụfọdụ n'ime ihe ndị a, mana ọ dị ka enweghị oge iji rụchaa ngwa ọrụ ahụ. Ka anyị na-arụ ọrụ na ya, ka m na-eche ihe kpatara na anyị agaghị ewepụta sọftụwia njikwa njikwa ọrụ anyị kpamkpam. Onye ọ bụla maara nke ihe ngwọta na-arụ ọrụ nke ọma karịa ka ụzọ oru ngo na ndị ahịa si eme?
Tags: ihe kacha mkpanjikwa ọrụngwanrọ njikwa oruNhazi oru ngonjikwa ọrụihe aga-emenjikwa otu
Re: Tụkwasị obi
Email, Achọrọ Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ Ndụ
Aug 15, 2013 na 6: 42 AM
Nyochawa ya, nke a nwere ike ọ gaghị abụ "ngwanrọ njikwa njikwa", mana m na-amalite iji Trello na arụ ọrụ m kwa ụbọchị. Pdị mfe bụ otu n'ime akụrụngwa ya kachasị mma. My ahịa na-abụghị oru pụrụ ọbụna ịghọta otú iji ya n'ime 5 nkeji.
Ma ọ bụ n'efu.
Aug 15, 2013 na 8: 54 AM
Daalụ @andrewangle: disqus, m ga-enyocha ya!
Aug 15, 2013 na 8: 17 AM
Onwe m, ana m eji ngwanrọ njikwa ngwanrọ nke SEO azụmahịa m. Ewubere kpọmkwem maka azụmaahịa SEO naanị. Nchịkwa oru n’onwe ya “oke” ka ọghara ịdị 100% na ụdị azụmaahịa niile na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Aug 21, 2013 na 6: 23 AM
Douglas, anyị wuru Brightpod (http://brightpod.com) na kpomkwem nke a bu uche. Emebeghi ọtụtụ ngwaọrụ PM maka ndị ahịa mana ị kwesịrị ilebanye anya na Brightpod.
Ihe ole na ole anyị na - eme dị iche iche bụ ụzọ ndị ụlọ ọrụ ga - esi nyocha ndị ọrụ site na ndị ahịa, gụnyere ndị ahịa na mkparịta ụka (na - enweghị ha ga - abanye nbanye), kalenda ederede na usoro Kanban dị mfe nke na - eme ka uche nwee maka mkpọsa na - aga n'ihu a gbasara n’usoro nkebi.
Ọ ga-amasị m ịma ihe ị chere banyere ya yabụ nye ya ntụgharị!
Mar 10, 2015 na 10: 14 AM
Ndewo Douglas. Daalụ maka ịkekọrịta nghọta gị bara uru! Oge ụfọdụ gafere, mana ọ ka bụ eziokwu.
M ga-atụ aro ka ị lelee anya anyị Nlekọta Ọrụ Nchịkwa maka ndị otu azụmaahịa - Comindware Project - mgbe a hụrụ gị site na nyocha nke ihe ị chọrọ pụtara na edemede ahụ.
Comindware Project na-enye ohere nhazi ọrụ. Iji mee nke ahụ, ị ​​ga-aga ngalaba na-arụ ọrụ. Pịa na otu onye otu ka ị hụ ọrụ ha niile gafee ọrụ ha niile wee nwee ike ịgbanwe ihe mbụ ahụ na ndabere nke onwe. O di nwute na, e nweghị ahịa / project prioritization, ma prioritization na a onwe onye ndabere nwere ike inyere - bụghị otú ngwa ngwa variant, ma n'ụzọ ọ bụla. Banyere ịkekọrịta ihe onwunwe ị nwere ike ịmepụta ụlọ mkparịta ụka akọwapụtara nke ọma dịka "Akụ bara uru" ma jiri ya dị ka otu ụlọ maka akụ niile. Ha ga-enweta n'ofe ọrụ.
Ihe omuma ndi ozo banyere Comindware Project na ikpe ubochi 30 di Ebe a - http://www.comindware.com/solutions/marketing-project-management/ Anyị ga-enwe obi ụtọ ịnụ nzaghachi gị gbasara azịza ya. You ga-enwe mmasị inyocha ya?
kacha mma oru ngo management ngwaọrụ
Jul 12, 2016 na 1: 09 AM
Isiokwu ahụ dị ịtụnanya, echiche gị masịrị m nke ukwuu. Enwetara m ozi kachasị mma na saịtị a nke blog, ọ bara ezigbo uru nye anyị niile. Daalụ maka ịkekọrịta post a.
Aug 10, 2016 na 10: 42 AM
Akwa isiokwu. M ga-ekerịta ahụmahụ m na "Emela", ọ bụ ngwanrọ njikwa ngwanrọ.
Ozugbo etinyere Ngwa emere na usoro azụmaahịa anyị, anyị ghọtara na ọkwa nrụpụta ọrụ n'etiti otu ndị ọrụ anyị nọ ebe niile yana ndị njikwa ọrụ anyị ezughi ịgba ụgwọ oge kwesịrị ekwesị maka ọrụ ndị ahịa. N'ime ọnwa mbụ, mgbe emechara sistemu ahụ, anyị nwere ike iweghachite karịa 10% na awa ndị nwere ike ịba ụba.
Offọdụ ndị otu anyị chere na anyị na-eledo ha. Fọdụ katọrọ ndị otu egwuregwu ndị ọzọ, ndị ọzọ achọghị ige ntị wee kpebie ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ. Mana na ngwụcha ụbọchị ahụ, ndị otu ndị otu fọdụrụ ghọtara ozi ahụ wee, taa, ndị otu ahụ bara uru ọzọ. Ndi oru oru ngo anyi ekwesighi itinye oge buru ibu n’ilele ndi otu ahu, ma onye obula nwetara ikike nke onwe.
Mgbe ọnwa iri na abụọ jiri, uru anyị bara karịrị 60% ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga. Ngosiputa nke emere nyere iji nye ndi otu ocha obi iru oru karie ka ha na aru oru ha.
M ga-atụ aro ka ị gaa http://www.doneapp.com maka ozi ndị ọzọ.
Saint D Claire
Sep 12, 2017 na 3:30 PM
Gbalịa Bitrix24. O nwere ihe niile ịchọrọ ma chọọ. M na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ dijitalụ. Enwere m otu ihe mgbu ahụ